Wararka ciyaaraha maanta - BBC Somali
Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta ee Yurub ee UEFA, Michel Platini, ayaa maanta duhurkii ku dhawaaqay in uu u tartamayo xilka madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee FIFA.
60-jirkan khadka dhexe kaga dheeli jiray xulka Faransiiska, ayaa waxa uu warqad u diray madaxda iyo xoghayayaasha guud ee xiriirada kubadda cagta ee 209-ka ee xubnaha ka ah hay'adda maamusho ciyaaraha adduunka ee FIFA, ayaa waxa uu ku sheegay: "In go'aanka uu si taxadar badan uu shakhsi ahaan u gaaray."
Musharaxiinta doonaysa xilka madaxtinimada FIFA ayaa waxaa qasab ah in ay codsigooda gudbistaan ugu dambeyn 26-ka bisha Oktoobar ee sanadkan, iyadoo doorashadana la qaban doono bisha Febraayo ee sanadka soo socda, xilligaasi oo magaalada Zurich lagu qaban doono shir aan caadi aheyn.
Hadaba gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka Sepp Blatter, oo ay da'diisu tahay 79, ayaa xilka ka degayaa bisha Febraayo ee sanadka soo socda kaddib markii uu guddiga maamula ciyaaraha kubadda cagta adduunka ee FIFA ay soo wajaheen dhibaatooyin dhanka musuq maasuqa ah.
Blatter ayaa waxa uu madax ka ahaa Fifa tan iyo 1998.
Dhanka kale Mexico ayaa waxa ay xilka ka qaaday tababarahooda Miguel Herrera, kaddib eedo loo soo jeediyay oo ah in uu feer ku dhuftay weriye, laba maalmood un kaddib markii uu dalkaasi Mexico ku guulaystay koob dahab ah.
Weriyaha oo ka tirsan taleefishin ayaa sheegay in Herrera uu qoorta ku dhuftay uuna ugu goodiyay garoonka diyaaradaha ee ee Philadelphia.
Gudoomiyaha xilka la wareegaya ee Xiriirka Kubadda Cagta ee Mexico Decio (Deekiyo) de Maria, ayaa waxa uu sheegay in dhacdadu aysan aheyn mid la jaanqaadaysa mabaadii'da tartan cadaalad iyo xushmad ku dhisan.
Mr De Maria ayaa waxa uu intaa raaciyay in "Qiyamkeenna, mabaadii'deenna ayaa wax walba ka sarreysa.
Tababare Herrera, oo ah 47 sano jir, ayaa kooxdiisa Mexico u hogaamiyay in ay gaarto wareega labaad ee kooxaha 16-ka ee Koobkii Adduunka ee 2014-kii. Mexico ayaa tartanka looga reebay wareega labaad dhammaan lixdii tartan ee adduunka laga soo bilaabo 1994-tii.
Waxa uu xilka la wareegay bishii Oktoobar 2013-kii, markaasi oo uu noqday tababarihii afraad oo loo magacaabo xulka Mexico muddo lix todobaad gudahood ah.